Thomas Tuchel Oo Lagu Wareejiyay Lacag Gaareysa 150m Oo Miisaaniyadda Chelsea Ah'
HomeWararka Ciyaaraha MaantaThomas Tuchel oo lagu wareejiyay lacag gaareysa 150m oo miisaaniyadda Chelsea ah’
May 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Roman Abramovich ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu u dhiibo tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel miisaaniyad 150 milyan ginni xagaagan.
In kasta oo ay weli shaqo u taalo loolanka loogu jiro in lagu dhammeeyo afarta ugu sarreysa kala sarreynta Premier League, Tuchel ayaa Blues ku hoggaamiyey finalka FA Cup iyo Champions League siday u kala horreeyaan.
Horraantii toddobaadkan, waxaa la soo jeediyay in madaxda sare ee Chelsea ay ku faraxsan yihiin inay u gacan geliyaan jmacalinka reer Jarmal heshiis kordhintiisa haatan ee 18-ka bilood ah.
Sida ay qortay The Sun , Abramovich ayaa sidoo kale siinaya Tuchel xoriyad uu lacag badan ku qarash gareeyo inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee soo socda iyada oo ay kooxdu doonayso in ay la tartanto kooxda Man City iyo kooxaha kula tartamaya.
Marka la fiiriyo hubanti la’aanta mustaqbalka Tammy Abraham iyo Olivier Giroud , Chelsea waxaa lala xiriirinayaa Erling Braut Haaland iyo Romelu Lukaku .
Waxaa sidoo kale jiri kara waji cusub oo khadka dhexe ah, dhaqaaq taas oo u oggolaan karta Billy Gilmour inuu xilli ciyaareed amaah ah kula joogo koox kale oo Premier League ah.